सुचना प्रविधि Archives – Satabdi News
काठमाण्डाै । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानले विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका मुख्य इन्टरनेट वितरण केन्द्रहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन काटेका कारण जुनसुकै बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विवादित पोलभाडाको निहुँमा देशको विभिन्न भागमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका डाटा सेन्टरमा प्रयोग भइरहेको विद्युत् लाइन काट्नाले इन्टरनेट सेवा
२ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्नहरुको जानकारी भए उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ। सीआईबीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्टी, हाइपरफन्ड तथा डिजिटल नेटवर्किङको कारोबार संलग्नहरुका बारेमा जानकारी भएमा सूचित गर्न अपिल गरेको हो । यसका साथै क्रिप्टो, हाइपरफन्ड तथा भर्चुअल नेटवर्किङ व्यवसायमा
फेसबुक मेसेन्जरको स्क्रिन सट गरेमा अर्को व्यक्तिमा नोटिफिकेशन आउने
१६ माघ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा हुने सुरक्षा प्रणाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै कम्पनीहरुलाई टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। त्यही भएर पनि आफ्नो ती कम्पनीहरु सुरक्षा प्रणाली दुरुस्त राख्न रातदिन घटिरहेका हुन्छन्। यस्तैमा मेटाले फेसबुक मेसेन्जरको फिचर्समा केही परिवर्तन गरेको छ। फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गर्ने क्रममा स्क्रिन सट लिए तुरुन्तै
१७ असोज २०७८, आइतबार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा अप्टिकल फाइबर नकाट्न आग्रह गरेको हो। पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत्
काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटको भाउ बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोलभाडा घटाउने संकेत नदेखाएपछि आइस्पानले सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोर्ट १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए।आइस्पानले इन्टरनेटमा मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी नियामक नेपाल
२८ भाद्र, काठमाडौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २०७८ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरुका लागि विषेश अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत एसईईका विद्यार्थीले एक रुपैयाँमा प्रिपेड सिमको खरिदका साथै रिचार्जमा बोनस ब्यालेन्स, निःशुल्क माइफाइभ सेवा र बोनस डेटा लगायत विभिन्न फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको
५ भाद्र, काठमाडौ । चर्चित सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले गलत सूचना तथा जानकारी ट्वीट गर्नेका विरुद्धमा उजुरी लिने भएको छ । गलत सूचनाको प्रवाह बढेको र त्यसले दिनप्रतिदिन नकारात्मक असर पारेको भन्दै ट्वीटरले गलत सूचना प्रवाह गर्नेका विरुद्धमा उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । गलत सूचना प्रवाह गर्नेका विरुद्धमा
२९ साउन २०७८, शुक्रबार। फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अर्को वर्ष सन् २०२२ बाट मात्रै कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित गराउने भएको छ । कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्टको फैलिँदो जोखिमका कारण अमेरिकाभरका आफ्ना कार्यालय भौतिक रुपमै पुनः खोल्ने फेसबुकको योजना आगामी वर्षसम्मका लागि धकेलिएको हो । आफूहरुको कार्यालय फिर्तीको विषय तिथिमितिले नभई तथ्यांकमा
८ जेठ, बेलबारी । भर्चुअलको माध्यमबाट शताब्दी न्युजले शताब्दी संबादको कार्यक्रम आज देखि शुरु हुने भएको छ । कोरोनाको यस्तो महामारी स्थितिमा स्थानीय सरकारको भुमिका के रहन्छ ? स्थानीय सरकार जनताप्रति बफादार भएर काम गरेको छ वा छैन ? भन्ने बिषयमा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम शुरु हुने भएको छ ।